Vaovao - Miaro amin'ny COVID-19 ny fonosana vaovao marobe misy rindrina maro
Miaro amin'ny COVID-19 ny fonosana vaovao misy rindrina maro
Ny aretina Coronavirus 2019 (Covid-19) dia virus vaovao iray izay hita fa antony nahatonga ny fihanaky ny aretin'ny taovam-pisefoana, anisan'izany ny pnemonia mety hahafaty. Nanomboka tany Wuhan, Sina ny aretina tamin'ny Janoary 2020, ary nanjary krizy pandemika sy manerantany. Voatondro vonjimaika ny viriosy 2019-nCoV ary nomena anarana ofisialy SARS-CoV-2 avy eo.
SARS-CoV-2 dia viriosy malemy nefa mahery vaika ary miparitaka hatrany amin'ny olona tsirairay. Miparitaka koa izy io rehefa mikohaka na mievoka ny olona iray voa, ary midina amin'ny rano na zavatra hafa ny rano. Ny olona iray izay mikasika ny amboniny ary avy eo mikasika ny orony, ny vavany na ny masony dia afaka mandray ilay virus.
Na dia tsy mitombo aza ny viriosy eo amin'ny sehatry ny tsy velona, ​​ny fandinihana natao tato ho ato dia mampiseho fa ny coronavirus dia afaka mijanona miaina na mifindra amin'ny metaly, fitaratra, hazo, lamba ary ny faritra plastika mandritra ny ora maromaro na andro maromaro, na inona na inona endrika maloto na madio. Mora ny manimba ilay virus, mampiasa disinfectants tsotra toy ny étanol (62-71%), hydrogen peroxide (0,5%) na sodium hypochlorite (0,1%) amin'ny famakiana ny valopy marefo manodidina ny mikraoba bitika. Na izany aza, tsy azo atao mihitsy ny manadio ny toerana rehetra amin'ny fotoana rehetra, ary ny famonoana otrikaretina dia tsy manome antoka fa tsy ho voaloto intsony ny faritra.
Ny tanjonay dia ny hamorona rakotra ambonin'aratra misy angovo ambonimbony kokoa izay afaka manilika ny glycoprotein spike izay miantsoroka eny ambonin'ny habakabaka, ary mampiasa akora simika mavitrika mba hahatonga ny spike glycoprotein sy ny nukleotide viral tsy hihetsika. Izahay dia namolavola NANOVA HYGIENE + ™ mandroso, miady amin'ny mikraoba (anti-viral ary bakteria), izay mampihena ny mety ho fandotoana mikraoba saika ho an'ny sehatra rehetra, ao anatin'izany ny vy, vera, hazo, lamba ary plastika amin'ny alàlan'ny fitsipahana ireo mikraoba, manolotra tsy miraikitra amin'ny pathogens sy ny fanadiovan-tena mandritra ny 90 andro. Ny teknolojia novolavolaina dia mandaitra sy voamarina manohitra ny SARS-CoV-2, ilay viriosy tompon'andraikitra amin'ny COVID-19.
Ny teknolojia misy antsika dia miasa eo amin'ny rafitra fifandraisana, izay midika fa raha vantany vao misy mikraoba mifandray amin'ny faritra mihosin-tany dia manomboka mamono ireo otrikaretina izy. Izy io dia noforonina niaraka tamin'ny fitambaran'ny nanoparticle volafotsy (toy ny virocidal) sy ny famindra otrikaina amnomaum qurany tsy mpifindra monina (toy ny virostatic). Ireo dia mandaitra izaitsizy amin'ny fampiatoana ny virus RNA voarakotra sy ny genome ADN amin'ny bakteria. Ny valiny dia nosedraina tamin'ny coronavirus (229E) (karazana Alpha coronavirus) ao Nelson Lab, Etazonia; ny coronavirus bovine (S379) (karazana Beta coronavirus 1) avy any Eurofin, Italia; ary MS2, virus RNA, viriosy misolo toerana hisolo ny virus Picoma toy ny Poliovirus sy ny olombelona norovirus avy amin'ny laboratoara NABL nahazo fankatoavana tany India. Ny vokatra dia mampiseho ny fahombiazan'ny> 99% raha andrana araka ny fenitra manerantany ISO, JIS, EN ary AATCC (sary 1). Ankoatr'izay, ny vokatra dia nosedraina noho ny toetrany tsy misy poizina araka ny tatitra manerantany momba ny hoditra tsy mitongilana manerantany (OECD 404) avy amin'ny foibem-pikarohana APT izay neken'ny FDA, Pune, India, ary isaky ny fanadinana leaching manerantany amin'ny fifandraisana amin'ny sakafo US FDA 175.300 avy any CFTRI, Mysore, India. Ireo valim-panadinana ireo dia manamafy fa tsy misy poizina ny vokatra ary azo antoka ampiasaina.
Nampiasa ny patanty an'ity haitao ity izahay tamin'ny fampiharana No. 202021020915. Ny maodelin'ny fiasan'ny teknolojia NANOVA HYGIENE + dia toy izao:
1. Rehefa mifandray amin'ny fonony ireo mikraoba, dia manakana ny famerenana ireo virus nucleotides, ny mikraoba, ny maody lehibe mahatonga azy io ho maloto. Izy io dia mifamatotra amin'ireo vondrona mpanome elektronika toy ny solifara, oxygen ary azota hita matetika amin'ny anzima ao anatin'ny mikraoba. Izany dia mahatonga ny anzima ho voamarika, ka tsy mahomby ny loharanon'ny angovo ao amin'ny sela. Ho faty tsy ho ela ny mikraoba.
2. Ny volafotsy cationic (Ag +) na QUAT dia miasa tsy mampihetsika ny coronavirus olombelona amin'ny alàlan'ny fifandraisany amin'ny proteinina amboniny (spike), S, miorina amin'ny fiampangana azy toy ny fiasan'ny VIH, virus hépatite, sns (sary 2).
Nahazo fahombiazana sy tolo-kevitra avy amin'ny fikambanana sy mpahay siansa maro ny teknolojia. NANOVA HYGIENE + dia mampiseho fahasembanana tanteraka ny bakteria pathogenika isan-karazany, ary mifototra amin'ny tatitra siantifika azo, mihevitra izahay fa ny raikipohy ankehitriny dia tokony hiasa amin'ny karazana viriosy marobe ihany koa.
Ny fampiharana ny haitao amin'ny sehatra samihafa dia afaka mampiato ny fiparitahan'ny ambaratonga faharoa avy amin'ny sehatra samihafa ka hatramin'ny sela velona amin'ny alàlan'ny fikasihana. Ny fonosana nano miaro tena dia miasa amin'ny sehatra rehetra toy ny lamba (sarontava, fonon-tànana, palitao dokotera, lambam-baravarana, lambam-pandriana), vy (fiakarana, vavahady tantana, vavahady, lalamby, fitateram-bahoaka), hazo (fanaka, gorodona, takelaka fisarahana) , beton (hopitaly, tobim-pitsaboana ary paroasy mitokana), plastika (switch, lakozia sy kojakoja an-trano) ary mety hamonjy ain'olona maro.